www.frontii.com Frontiir was founded by three co-founders who have world-class expertise in information and communication technologies with 30 years of combined industry experience in America. Two co-founders are MIT PhD graduates and have authored tens of technical papers in the areas of wireless networking, cloud computing and IT.
Visit to Myanmar. Out of the box packages for travel to Myanmar. Flight makes it easy for your trip.
Posted by Myo Min Htun at 10:48 AM2comments:
iTools (Free alternative tools to iTunes)
iTunes သုံးစရာမလိုပဲ iTunes ကဲ့သို့ တော်တော်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Tool ပါပဲ။ အဲဒါကတော့ iTools ပါပဲ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောပြတာနဲ့ သုံးကြည့်တာ အရမ်းကို အဆင်ပြေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ စိတ်ဝင်စားသူများလဲ သုံးရတာ အဆင်ပြေအောင် ဒီပို့လေးကို ရေးဖြစ်တာပါ။
Download ကတော့ ဒီကနေ ဆွဲလို့ရပါတယ်။
လက်ရှိ version ကတော့ 2012 Beta 0329 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ iTools လုပ်လို့ရတဲ့ Functions တွေ့ကတော့...
iTools 2012 Beta 0329 Released:
Add Media library in the local Library
Add HTTP Proxy in Option
Add Ungrouped in contact, and Up\_Down keyboad shortcut
Fix the problem when importing photo
Fix photo viewing problem
Improved importing photo speed
iTools 2012 Beta 0216 Released:
1. Add iTunes backup management.
2. Add Time of apps added into iTools app lib. Now can be sorted by time.
3. Optimize FileSystem.
4. Now the Folder can be removed properly from Favorite
5. Add Path to shortcut the location
6. Brand new Plist editor
7. Add tag color
8. Add shortcut key like F5 for refresh, Ctrl+D for export, Ctrl+S for save, Ctrl+Z for reversal.
9. Now music can be sorted by ID3 track No.
10. IOS 4.3.3 SMS restoring won't create new dialog.
11. Optimize Picture loading speed.
12. Solved iTunes incompatible problem.
iTools 2011 Beta 1119 Released:
1. Supports devices: iPhone 1,3G,3GS,4,4S iPad 1,2 iPod touch 1,2,3,4
Version အသစ်ထွက်ရှိလာပါက Alert ပေးတယ်။ "Yes" ဆိုပါက အလိုလျှောက် သူ့ဆာဗာက နေ Download လုပ်ပြီးတော့ ဖိုင်ကို auto update လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Application များကို Install/Uninstall လုပ်ရန်သော်လည်ကောင်း၊ Video/Images များကို download/upload လုပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ Contacts များကို Save/Update ပြုလုပ်ခြင်း၊ Notes များကို Save ပြုလုပ်ခြင်း၊ Music/Video များ ထည့်သွင်းခြင်းတို့အပြင် အခြား Functions တော်တော်များကို ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေတဲ့ Tools တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
iTunes ကို သုံးရတာ စိတ်မရှည်သော သူများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော Free tools လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် - iTunes ကို Install လုပ်ထားရပါမယ်။ iTools ကို iTunes Library တွေကို ယူသုံးထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myo Min Htun at 9:52 AM 1 comment:
Have fun with iFunbox iphone file browser
iPhone အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက် အလွယ်ကူဆုံး file browser ကတော့ iFunbox ပဲ ။ အရမ်းကို PowerFul ဖြစ်တယ်။ iTune မလိုပဲ iPhone ထဲက File/Folder တွေကို Drag & Drop လုပ်ရုံးပဲ။ Jail Break လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေဆိုရင် system level directory တွေ အထိတောင် ၀င်လို့ရပါတယ်။
iPhone သုံးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ iFunbox က မရှိမဖြစ်ပဲ။
ဒီမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Get iFunBox here
Posted by Myo Min Htun at 10:49 AM No comments:
စင်္ကာပူမှ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက်လေတွေကြောင့် အခုမှပဲ အနားရတော့တယ်။ အတွေ့အကြုံလေးတွေတော့ ရလိုက်တယ်။ ဈေးတွေ အမြန်ပြေးဝယ်ရတယ်လေ။ ဆိုင်တွေ၊ Food Center တွေက အကုန်ပိတ်မယ် နှစ်ရက်တောင် ဆိုတော့။ ရုံးက နေ့တစ်ဝက်ပိတ်ပေးတယ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။ ပြီးတော့ နှစ်ရက်ဆက်တိုက်။ ပြီးရင် Weekend ဆိုတော့ ပျော်စရာကြီး။ ဇာတ်လမ်းတွေ ကြည့်ဖို့ စုရသေးတယ်။ Fringe Series လေ။
Posted by Myo Min Htun at 10:41 AM No comments:
Having Fun Zawgyi Font with iPhone 4
iPhone4ကို plan နဲ့ ၀ယ်လိုက်တယ်။ iOS 4.0.1 ဖြစ်နေတော့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို စေတန်တို့ဆိုဒ်ကနေ သွင်းလို့မရဘူးလေ။ Compatible မဖြစ်လို့လေ။ ဘာလို့သိတာလဲ ဆိုတော့ Install လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ iPhone4က ပြန်ကို တတ်မလာတော့ဘူး။ ပန်းသီးပုံမှာပဲ ရပ်နေတယ်။ Restore ပြန်လုပ်လိုက်ရတယ်။ Jailbreak ပြန်လုပ်ရတယ်။ အော် ဒါနဲ့ တစ်ခုရှိတာက ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ shsh ကို Jailbreak မလုပ်ခင် သိမ်းထားဖို့လိုတယ်။ နို့မို့ဆိုရင် iOS ကို version upgrade လုပ်လိုက်ပြီး နောင်အခါ version အဟောင်းကို ပြန်သွားချင်ရင်တော့ တော့လို့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဇော်ဂျီကို ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်ချင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကို အင်တာနက်မှာ လိုက်ရှာတယ်။ နောက်ဆုံး အဖြေတစ်ခုတွေ့တယ်။ ဇော်ဂျီကီးဘုတ်ဘာလို့ထည့်မရသလဲဆိုတာကိုပေါ့။ စေတန်တို့ရေးထားတာ ကီးဘုတ်မှာက ပန်းသီးရဲ့ ဖောင့်ကို ဇောဂျီနဲ့ အစားထိုးလိုက်တာ။ iOS 4.0.1 မှာကျတော့ ပန်းသီးကို သူရဲ့ ဖောင့်တွေကို True Type Font Collection ဆိုပြီး .htc ထဲမှာ ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ဖောင့်တွေအများကိုပေါင်းထည့်ထားပြီး တစ်ဖိုင်တည်းဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာ။
အဲဒီတော့ နောက်ဆုံး စဉ်းစားမိတာကို အဲဒီဖောင့်collection ကိုဖြေပြီး ဇော်ဂျီး ယူနီကုတ် တွေကို font တစ်ခုစီထဲမှာ အစားထိုးမယ်။ ပြီးရင် ပြန်ပြီး .htc ဖိုင်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို စဥ်းစားမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ နောက်ဆုံးတော့ စမ်းသပ်ပြီး လုပ်ကြည့်လိုက်တာ အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
အခုမှပဲ Zawgyi ကို ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်လို့ရတော့တယ်။ Safari, Mail, Springboard, Dailer, Chat အားလုံးမှာ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
Font mapping လုပ်ရတာ နည်းနည်းတော့ အဆင့်များတယ်။ သို့သော်လည်း ၃ နာရီလောက် အချိန်ပေးပြီးလုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်။
Posted by Myo Min Htun at 9:17 AM7comments: